> Resource > Video > Sida loo Download Qosol Cat Videos in Click ah
Funny video mar walba na siisaa farxad aan la sharrixin iyo madadaalada. Oo kanu waa mid dhab ah videos cat funny on YouTube. Haddii aad rabto in aad sii videos, kuwaas oo dib u eegto waqti ka waqti, tallaabo muhiim ah waa in ay iyaga soo bixi offline. Si aad u karti leh oo si fudud u samayn, waxaan jeclaan lahaa in la wadaagto qalab video dajinta xirfad halkan: Wondershare AllMyTube . Haddii aad ordaya ah Mac OS X, kaliya noqon in ay version Mac: Wondershare AllMyTube for Mac . In socda, waxaan ku tilmaami doonaa sida loo soo bixi videos cat funny ka mid click.
Ku rakib oo ay maamulaan Wondershare AllMyTube ku on your computer (halkan, ayaan qaadan version Windows sida tusaalaha, version Mac sidoo kale ka shaqeeya la mid ah).
1 Search funny videos cat
Raadi videos cat funny on YouTube ama goobaha kale video qaybsiga. Barnaamijkan waxa si buuxda u la jaan qaada IE, Firefox, Chrome browser. Haddii aad tahay qof user Mac ah, waxaad sidoo kale qaataan karaa Safari browser.
2 Download funny videos cat in mid ka mid click
Ka dib markii aad ka heli videos aad rabto in aad kala soo bixi, guji URL iyo bilaabaan in ay u ciyaaro. Isla markiiba, waxaad ka heli doontaa sabayn "Download" button Midigta sare ee suuqa kala ciyaaro. Guji ku yaal, markaas hawshan lagu mar dari doonaa liiska dajinta. Mararka qaarkood, sidoo kale waxaad dooran kartaa xalka haddii video asalka siisaa fursado dhowr ah. Waxaa ay mudantahay in la xuso in barnaamijkan qadarin kaloo ka caawisaa in ay shaandhayso soo xayeysiis looga xumaado, haddii uu jiro.
Ka sokow gujinaya "dajinta" badhanka si toos ah oo muujinaya video kor ku xusan, waxaad nuqul ka karaa iyo URL koollada si toos ah u furmo suuqa barnaamijka si aad u bilowdo hawsha aad dajinta.
3 Beddelaan funny cat videos (optional)
Ka dib marka aad hawshan ay u dhammeeyaan dajinta, waxaad heli doontaa ogeysiis pop up ah. Riix ah "bixi" tab, waxaad ka arki kartaa dhammaan faahfaahinta faylasha aad soo bixi. Duration File, size, xallinta, qaab, iwm ayaa dhammaantood si cad u muujiyay. Dhinaca midig ee video kasta bar, waxaa jira ah "Beddelaan" button, sida ku cad belows.
Riix Beddelaan u muujiyo suuqa kala qaab wax soo saarka. Halkan, waxaad dooran kartaa dhammaan qaabab loo jecel yahay sida MOV, AVI, wmv, iwm sida wax soo saarka si ay u ciyaari Socda. Ama si toos ah u dhoofiyaan si presets qaybiyay kiniinka sida iPad, iPhone, iPod, huriyaan dab, PSP, Madaxweyne Siilaanyo, iyo in ka badan.
Talooyin Bonus: dejisan iyo badalo videos cat funny ka mid click
Si loo badbaadiyo aad waqti iyo dadaal, barnaamijkan gelineya inaad soo bixi dibna loogu badalo videos cat funny ka mid click. Si aad u sameeyo, marka hore waxaad u baahan tahay in ay beddelaan ah "Download markaas Beddelaan" doorasho ku, ka dibna aad ku doorato qaab doonayo ama horena qaybiyay qalab u gaar ah. Ka dib markii in, si fudud u heli aad jeceshahay videos cat funny oo iyaga ka soo dejisan in mid ka mid click. Aad ugu dhakhsaha badan, videos waxa ay mar horeba ku cad "degsan" liiska qaab aad doorato.